ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် GDPကို သြဂုတ်လ ၁၄ရက်နေ့ ၀၂:၅၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်.
မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဂျပန်ဒေတာများသည် ကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်. ၂၀၁၇ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင် နိုင်ငံစီးပွားရေး ၁%တိုးတက်ခဲ့ပြီး ထိုတိုးတက်မှုသည် ၁၁နှစ်ကြာကာလအတွင်း အတော်ပင် ကောင်းမွန်သည့် စီးပွားရေးဒေတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်. ဇွန်လအတွင်း ဂျပန်ပို့ကုန်များသည်လည်း တိုးတက်အားကောင်းလာခဲ့ပါသည်.
ငွေဖောင်းပွမှုအားနည်းပါက ဂျပန်ယန်းတန်ဖိုးအားပျော့မှာဖြစ်တာကြောင့် ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်နေနှင့် ငွေကြေးမူဝါဒတွေကို ဖြေလျှော့လာနိုင်ပါသည်. သို့ရာတွင် ဂျပန်GDPအားကောင်းလာတာ မြင်ရပါက ဂျပန်ယန်းတန်ဖိုးမြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်ပါသည်. တချိန်တည်းမှာပင် ဂျီဒီပီအားပျော့ခဲ့ပါက ဂျပန်ယန်းတန်ဖိုးကျနိုင်ပြီး USD/JPYအတွဲကိုတော့ အတက်မြင်လာရနိုင်ပါသည်. ထို့ကြောင့်ပင် ယနေ့သည် ဂျပန်ယန်းကိုရောင်းဝယ်မည့် ထရိတ်ဒါတို့အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်!